Daawo:Madaxwayne Cabdullahi Yusuf wuxuu kaxishooday inuu dhaho 6-dii sargaal ee beesha Isaaq waxaa dilkoda amray Janaral Galaal. | ogaden24
Daawo:Madaxwayne Cabdullahi Yusuf wuxuu kaxishooday inuu dhaho 6-dii sargaal ee beesha Isaaq waxaa dilkoda amray Janaral Galaal.
Janaraal Galaal oo kamid ahaa saraakiishii ciidanka xooga Soomaaliya ayaa magaalada Hargaysa kutilmaamay Horoshimo isaga oo muujinaya in ay bur buriyeen dad gaar ah oo ay ugu horeeyaan Cali Samatar Maxamed Siyad iyo shakhsiyaad kale isaguna uu iska bari yeelayo.
Janaraal Galaal oo ahaa saraakiishii ciidanka xooga dalka ee Hogaaminaysay dagaalii 77- ayaa kadib markii dagalka laga soo noqday waxaa uu bixiyay amar lagu Laayay saraakiil badan oo katirsanaa ciidanka, waxaana kamid ahaa 6-sargaal oo kasoo jeeday beesha Isaaq laguna Toogtay Hargaysa.
Allaha u naxariistee Cabdullahi Yuusuf oo kahadlayay dilkii loogaystay saraakiishii laga cabsi qabay inay Gadoodaan waxaa uu ka Gaab saday inuu warbaahinta kasheego in amarkii lagu Toogtay saraakiishaas uu bixiyay Gen Galaal, halka Janaraal Galaal uu wixii kadhacay dhacay magaalada Hargaysa dusha u saaray marxuum Samatar oo waliba uu xaqiraadna ugu daray, Hadaba Cabdullahi Yuusuf oo kahadlaya sidii wax u dhaceen halkan kadaawo.